Umbuzo Izinkinga B773ER
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #294 by Dariussssss
Kulungile, i babe entsha B773ER Philippines kusuka lapha, futhi kukhona inkinga nge hydraulics. Esinye salezi zimiso, kubonakala ezingenalutho, futhi kungakhathaliseki ukuthi ngenzani, uhlala efana naleyo. Ngenxa yalokho, ngiye ngifise akakwazi ukuqondisa futhi wazihlephula emhlabathini. Konke okunye okubonakala kulungile, indiza nice.
On the engenhla ECAM screen, kukhona uhlu amaphutha nge hydraulics. Bonke kubo babe yinto hydraulics system C, kanti ngakolunye ECAM eziphansi, okuwukuthi omunye alinalutho ngempela.
Ngiphinde abe iphakethe B772 kulayishiwe kusuka lapha, ephethe VC efanayo, kodwa ngaphandle amaphutha.
Ngakho, enye indlela yokulungisa lesi?
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #354 by Gh0stRider203
Nomlilo guys yesondlo, futhi uthole crew entsha?
Zonke bayazidlalela eceleni ... ngeshwa anginayo le nyoni, ngakho akukho okuningi angikwazi ukukwenza.
Wake wasibuka wonke panel khona ngengozi?
Isikhathi ukudala page: 0.922 imizuzwana